Singapore " Journey-Assist - Mahaliana any Singapore
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Сингапур
Sarintany ifanakalozana mahasarika sy torapasika any Singapore
Mivory! Singapaoro - "Lion City" - "Disneyland for Ad pakeke" - "City of Inhibitions". Inona no tadiavin'ny fanahinao? 😉
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Singapore
Singapore dia fanjakana nosy kely manana velarana 710 sq. km. Saingy mandritra izany fotoana izany, laharana faha-4 manan-danja eo amin'ireo ivon-toerana ara-bola manerantany i Singapore, ary mitana andraikitra lehibe eo amin'ny varotra eran-tany. Ny seranan-tsambon'i Singapore no iray amin'ny lehibe indrindra manerantany amin'ny resaka fifamoivoizana sy ny fivezivezena amin'ny mpandeha.
Mpizahatany 10 000 farafahakeliny tonga any Singapore isan-taona. Mba hahaliana ny mpizahatany bebe kokoa dia natokana ara-dalàna teto ny casinos tamin'ny 000. Ho an'ny fifaninanana mahomby amin'i Bangkok, Tokyo, Shanghai ary Hong Kong, namboarina ny jiro haingon-trano tsara tarehy. Ary mba hampitomboana ny fahalianan'ny vahiny amin'ny sakafo ao Singapore, dia napetraka ny hetsika fanao isan-taona ny Fetin'ny Culinary any Singapore. Ao koa ny fialantsasatra toy ny fetin'ny masoandro, ny fetin'ny Noely ary ny fetin'ny firavaka izay atao eto amin'ity firenena ity.
Any Singapore, dia malefaka sy mangentika ny toetrandro. Tsy misy fizarazarana milaza amin'ny taona ho amin'ny vanim-potoana maina sy orana. Ny fanao amin'ity firenena ity dia ny fifindrana tampoka avy amin'ny masoandro mamirapiratra amin'ny orana sy ny mifamadika amin'izany. Ny toetrandro mandritra ny taona dia mazava tsara ny ankamaroany. Ny hafanana amin'ny mitatao vovonana dia +31, amin'ny alina ny isotherm dia +24. Manamaivana ny hafanana ny rivotra sy ny rivotra mahery. Avy ny orana mandritra ny taona, na izany aza, amin'ny volana novambra-janoary, rehefa manjaka eto ny monsoon-northeast, dia orana any Singapore vao 10 minitra monja. Manomboka tampoka izy ireo ary mijanona haingana.
Tsy misy ody maina any Singapore. Ny orana isam-bolana dia mihoatra ny 140 mm. Mandritra ny taona, 2 mm ny presipitasi. Ny ankamaroan'ny orana (amin'ny antsalany 500 mm) dia avy ny orana amin'ny Desambra, ary ny kely indrindra (amin'ny antsalany 300 mm) amin'ny volana Jona. Matetika ny oram-baratra (matetika indrindra amin'ny Mey) - eo ho eo amin'ny 140 andro isam-bolana.
Fiteny any Singapore
Any Singapore, ny ankamaroan'ny mponina dia mahay teny anglisy. Ny ankamaroan'ny famantarana sy famantarana dia amin'ny teny anglisy ihany. Ny Maleziana, sinoa (ankamaroan'ny mandarin) ary fiteny Tamil no efa mahazatra eto.
Fivavahana any Singapore
Ny fivavahana malaza indrindra eto dia ny bodisma. 40% -n'ny mponina no manao azy. Ny 15% ny Singaporeana iray hafa dia Silamo ary mitovy ny isan'ny Kristiana. Misy ihany koa vondrom-piarahamonina sy tempolin'ny Hindus, Confucians ary Taoista. Ampahany lehibe iray amin'ny mponina ao Singapore (voalohany indrindra, ny olona manam-pahaizana indrindra) no tsy mino an'Andriamanitra. Mandray fepetra hampihenana ny fitaomana ny finoana Silamo ao amin'ny firenena ny governemanta Singapore.
Mponina any Singapore
Ny zom-pirenena indizena ao amin'ity nosy ity dia ny Malay. Rehefa naorina teto ny zanatany britanika dia nanjary fampandrosoana varotra sy famindran-toerana ny eropeana, sinoa ary karana maro tany Singapour. Maherin'ny 75% ny mponina ao Singapour ankehitriny dia sinoa. Ny Malay dia manodidina ny 14%, karana - 8%.
Any Singapour, ny hakitroky ny mponina dia iray amin'ny avo indrindra amin'ny firenena rehetra manerantany. Manodidina ny 4 ny olona. isaky ny sq. km. Tamin'ny voalohany. Tamin'ny taona 900 dia avo dia avo ny tahan'ny zaza teraka teto, saingy nanao programa fandaharam-pianakaviana ny governemanta, izay nahatonga ny fihenan'ny taham-piterahana efa ho in-1960 (ankehitriny dia manodidina ny ankizy 2 isaky ny olona 13 isan-taona). Ny isam-ponina amin'ny taona 1 dia eo amin'ny 000 tapitrisa, fitomboana 2019%. Ny taham-pahafatesana dia eo amin'ny 5,6 isaky ny olona 3,4 isan-taona. Ny androm-piainana any Singapaoro dia iray amin'ny avo indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny 4,3 taona ho an'ny lehilahy ary 1 taona ho an'ny vehivavy.
Vola ao Singapore
Ny vola ao Singapore dia dolara Singapore. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny 11.11.2019/0,73/46,94, ny dolara Singapore dia 18 dolara amerikana, 1,5 roubles rosiana, hryvnias XNUMX avy any Okrainiana, roubles XNUMX.
Ny biraon'ny fifanakalozana any Singapore dia misy any amin'ny ankamaroan'ny banky, fivarotana, hotely ao an-toerana. Tsy misy birao fifanakalozana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna eto amin'ity firenena ity. Amin'ny fotoana rehetra, azo antoka tanteraka ny fifanakalozana. Amin'ny teboka maro avy amin'ireo izay any amin'ny magazay, hotely na eny an-dalambe dia tsara kokoa ny taha raha oharina amin'ny birao fifanakalozana banky. Ny ankamaroan'ny banky dia misokatra manomboka amin'ny 09:30 ka hatramin'ny 15 manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, raha ny asabotsy kosa dia ny 09:30 ka hatramin'ny 11:30 ihany ny faharetan'ny asa. Eto ianao dia afaka mandoa amin'ny carte de crédit saika hatraiza hatraiza - amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra, fikarakarana ho an'ny daholobe, fivarotana ary na amin'ny taxi aza.
Tsy misy fameperana ny fanafarana-fanondranana vola avy any Singapaoro. Ho an'ireo mpandeha mihoatra ny 18 taona dia azo atao ny manafatra tsy misy haba any amin'ny firenena izay tsy mihoatra ny 1 litatra ny divay, ary koa tsy mihoatra ny 1 litatra ny zava-pisotro misy alikaola mahery ary tsy mihoatra ny 1 litatra labiera. Ny isan'ny sigara betsaka indrindra ho an'ny fanafarana tsy andoavam-bola dia 200, sôkôla ary vokatra confectionery hafa - tsy mihoatra ny 50 dolara Singapour, entana manokana ary entana hafa - hatramin'ny 300 dolara Singapore.
Manana tamba-jotra mandroso tokoa ny tanàna. Amin'ny ankamaroan'ny fiara fitaterana, azo atao ny mandoa vola mivezivezy miaraka amin'ny vola madinika, izay tokony arotsaka any amin'ny boaty mpamily. Matetika dia tsy manome fiovana ny mpamily, noho izany dia mila manana ny habetsaky ny vidin'ny saran-dàlana ianao. Manomboka amin'ny 5.30 hariva ny fifamoivoizana bus ary mifarana amin'ny 00.00.
Ao Singapore ihany koa, misy taxi-be namboarina tsara. Maherin'ny 18 ny fiara misy fiaramanidina mpiasan'ny serivisy 000 mitondra fiara manerana ny tanàna. Ireo serivisy ireo dia tsy mitovy amin'ny lokon'ny fiara, na izany aza, mitovy ny saran-dalan'izy ireo.
Any Singapore dia misy koa ny lalamby, izay misokatra amin'ny 6.00 ka hatramin'ny 00.00. Namboarina tsara ihany koa izy ity ary mamela anao haingana sy tsy manam-bola hanerana ny toerana rehetra. Ny halavan'ny fiaran-dalamby dia 3-8 minitra. Ny sandan'ny dia no mamaritra ny elanelana.
Misy ilay antsoina hoe “Rickshaws cycle” eto. Amin'izay fotoana izay dia tsy mampiasa io karazana fitaterana io ny Singaporeana samirery. Ny bisikilety bisikileta no hita matetika any Chinatown, ary koa amin'ny faritra taloha ao an-tanàna. Tsy mampiasa metatra ry zareo, noho io antony io dia ekena mialoha ny saran-dalan'ny dia. Tsara kokoa raha mifandray amin'ilay mpamily manana lisansa mety. Ny rickshaw eto dia heverina ho manintona mpizahatany kokoa noho ny fomba fitaterana, ary mihoatra ny fiarakaretsaka.
Fiantsenana any Singapore
Singapore dia paradisa fiantsenana ekena. Afaka mividy eto ianao saika ny zava-drehetra ary amin'ny ankamaroan'ny habetsahana. Noho izany, mpizahatany sasany tonga eto amin'ity firenena ity bebe kokoa mba hiantsena fa tsy amin'ny fialamboly. Ny zava-drehetra dia misy, afa-tsy, angamba akanjo be loatra. Ampy ny fotoana hiantsenana: ny magazay lehibe eto dia misokatra manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 22 isan'andro. Andro fialantsasatra ho an'ny magazay kely ao Chinatown ihany ny alahady.
Entina any Singapour avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny entana. Samy nahavita niditra tao amin'ny tsenan'i Singapour ny orinasa mpamokatra lehibe sy ny orinasa kely tsy dia fantatra noho ny politika ara-barotra liberal an'ny governemanta amin'ity firenena ity. Singapore no mpitarika amin'ny fivarotana fizahan-tany amin'ireo tanàna rehetra any Azia. Mpizaha tany 70 000 eo ho eo no tonga eto isan-taona mba hiantsena. Zava-dehibe ny fivarotana tombony sy mahaliana eto raha ampiarahina amin'ny fitsaharana tsara.
Any amin'ny afovoan'i Singapore mivelatra amin'ny làlana Orchard. Misy indrindra ireo fivarotana amin'ny karazan'entana sy trano fivarotana lehibe. Raha liana amin'ny fiantsenana eto amin'ity firenena ity ianao, dia mila antoka ho any ianao. Na izany aza, tsy misy dikany ny fividianana entana avy amin'ireo orinasa fanta-daza, satria ny marika erak'izao tontolo izao any Singapore dia lafo lavitra noho ny any amin'ireo firenena eropeana tandrefana. Saingy misy orinasa marobe eto an-toerana, izay ny vokatra ihany koa dia mirehareha amin'ny kalitao ary miaraka amin'ny vidiny mirary.
Andrefana sy Atsinanana mihaona eo amin'ny latabatra any Singapour. Ny vokatr'izany dia ilay antsoina hoe lakozia. Azia Vaovao, izay misy lovia tany am-boalohany izay mampifangaro ny fomban'ny sakafo nasionaly any India, Sina, Malezia ary Eropa Andrefana. Tian'ireo Singaporeana ny sakafo avy amin'ny firenena maro karazana. Na ny mpivarotra sakafo eny an-dalana na ny mpahandro ao amin'ny trano fisakafoanana misy kintana Michelin dia afaka manomana sakafo isan-karazany izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia voamarina tsara ny fahadiovana na aiza na aiza, ka tsy hatahotra ny hihinana eto ianao - na dia eny an-dalambe aza. Ny trano fisakafoanana any Singapour dia manolotra ny sakafo eropeana rehetra, manomboka amin'ny hamburger ka hatramin'ny sakafo matsiro. Ao an-tanàna, ny trano fisakafoanana kely sy ny toeram-pisakafoanana ambony dia misolo tena betsaka.
Sarintany mahaliana sy torapasika any Singapore
sainam-pirenena an'i Singapore
Voankazo any Thailand
Sarintany manintona an'i Thailand
True Mobile (TrueMove) - mpandraharaha finday any Thailand
AIS One-2-Call - Operator Mobile ao Thailand
Faritra ao Thailandy. Aiza ho aiza?
Avy any Thailand ka hatrany Laos
Avy any Thailand ka hatrany Myanmar
Avy tany Thailand ka hatrany Kambodia
Avy any Thailand ka hatrany Vietnam
Avy any Thailand ka hatrany Singapore
11.06.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny endrika Mifandray tsy misy
13.06.2019 / fanehoan-kevitra hanoratanao ireo fitsangatsanganana fitateram-bahoaka tsy misy
13.07.2019 / fanehoan-kevitra fandraisam-peo Autogyro tsy misy
Valan-drano any Waterbom, Bali, Indonezia
02.09.2020 / fanehoan-kevitra eny amin'ny valan-drano Waterbom, Bali, Indonezia tsy misy
13.06.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny fiakarana tendrombohitra tsy misy
Ny fanofana bisikileta ao Thailand
09.08.2019 / fanehoan-kevitra amin'ny fanofana bisikileta any Thailand tsy misy
Seranam-piaramanidina Ngurah Rai (Denpasar, Bali)
06.07.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai (Denpasar, Bali) tsy misy
10.11.2019 / fanehoan-kevitra tao Ayutthaya, Thailand tsy misy
15.11.2019 / 1 Comment mankany Bangkok
3 volana lasa izay
Mety ho liana amin'ny lahatsoratro ianao - Ireo zotran-tany sy zaridaina 10 tsara indrindra any Singapore - TripAdvisor